မောင်ရင်ငတေ ** MAUNGYINNGATAY **** မောင်ရင်ငတေ ***: ** နော်မန်ဒီ တံငါ ** *
နော်မန်ဒီ တံငါ (ဓါတ်ပုံ မရငတ)
နော်မန်ဒီကမ်းခြေ အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြား ရေပြင်က ... တနေ့တာ လုပ်ငန်းခွင်ကနေ ပြန်လာနေတဲ့ ပြင်သစ် တံငါအိုကြီး တယောက်ရဲ့ အိမ်အပြန် ခြေလှမ်းများပါ၊
ကမ္ဘားထက်ရောက်ရင်တော့ သူထိုင်နေကျ ကဖေးဘားလေးမှာ အမောပြေထိုင်ရင်း ဘီယာတခွက် ချလေမလား ခပ်ပြင်းပြင်း ဒေသထွက် ကာဗားဒိုလ်း ပန်းသီးအရက်တခွက်ကို မော့လေမလား … .. ..... . . .. . ….. .. . မောင်ရင်ငတေ တွေးနေမိတာပါ၊
ကိုယ်တိုင်ကသာ လက်ကြောတင်းအောင် မလုပ်တတ်ပါတဲ့ မောင်ရင်ငတေ တယောက်ကတော့ သူများတွေ လက်ကြောတင်းတာကိုတော့ စာနာမိပါလေ . .... ရဲ့ . . .... . .. . . .. . …. . .. …… ၊
ဒီရေပြင်ကြီးက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၇၀ က ကမ္ဘာကျော် နော်မန်ဒီကမ်းတက်တိုက်ပွဲများကြောင့် နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ရေပြင်ပါ၊
ဒီကနေ့ မောင်ရင်ငတေတို့ ခေတ်ကာလများမှာတော့ အဲဒီလို . ... ….. .. စစ်သမိုင်း အဟောင်းအမြင်းများရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းတွေကို စိတ်ဝင်စားသူတွေရော ပင်လယ်ကမ်းခြေ သဲသောင်ပြင်တွေကို ချစ်မြတ်နိုးသူများနဲ့ပါ စည်ကားလှပါတယ်၊
အဲသလို စည်ကားလာတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေနဲ့အတူ ကပ်လျှက်တွဲလို့ ပါလာခဲ့တာကတော့ . . …… စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းတွေပါ၊ လူတွေဟာ အစာမစားဘဲ နေနိုင်ကြတဲ့ သူတွေမှ မဟုတ်တာ၊
အဲလို အစာစားမှုနဲ့အတူ ဒေသခံတွေ စားမှုအတွက် အပြင် ဒီနေရာကို လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ သူတွေအတွက် စားသောက်ဆိုင်တွေ .... အစားအစာတွေ လိုလာပါတယ်၊
လိုအပ်တာတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက် တံငါလုပ်ငန်းတွေ တံငါသည်တွေ လိုအပ်လာပါတယ်၊
အဲသလို မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတဲ့ တံငါသည်ကြီးက သူဘဝကို သူ …. …. ကျေနပ်ပါရဲ့လား . .. .. …၊
မောင်ရင်ငတေ တွေးမိတာပါ၊ တွေးမိယုံ တွေးမိရတာပါ၊
တကယ်တော့ သူက တံငါသည် ပြင်သစ်ကြီး တယောက်ပါ၊ မောင်ရင်ငတေကကော ဘာပါလဲ . …၊
Libellés : ဘဝထဲကလူသား, ပြင်သစ်တခွင်ဆီသို့, နော်မန်ဒီ ကမ်းခြေ